Saturday January 15, 2022 - 12:25:57
Aroortii hore ee 15,1,2016 maanta oo kale ayay ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab waxay weerar ku kadiyeen ciidamo katirsan soo duulayaasha Kenya oo xilligaas ku sugnaa degmada Ceel-Cadde.
Sidoo kale maanta waxay ku beegantahay sedax sano kadib markii uu dhacay weerarkii DusitD2 ee magaalada Nairobi halkaas oo dagaalyahanno katirsan Al Shabaab ay ku laayeen dad isugu jira Kenyaan iyo ajaanib reergalbeed ah.
Dhismayaal isku raran ah ayuu weerarku ka dhacay iyadoona ciidamada ammaanka Kenya ay ku adkaatay soo afjaridda dagaalyahannadii weerarka qaaday.
Weerarkii Ceelcadde oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa lagu xasuuqay ku dhawaad 200 oo katirsan melleteriga Kenya ee KDF-ta loo yaqaan.
Degmada Ceel-Cadde ee gobolka Gedo ayaa qiyaastii 60KM ujirta magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolkaasi dhaca Koonfur galbeed dalka Soomaaliya.
Dagaalyahannada jihaadiga ah ayaa dagaalka ku qabsaday gaadiid gaashaaman oo ciidanka Kenya lahaayeen, Keydad hub ah iyo saanado kale oo melleteri.
hadda oo 6 sanadood laga joogo dagaalkii Ceel Cadde ciidamada Kenya waxay ka baxeen inta badan deegaannadii ay ka joogaan gobolka Gedo sida Faafax-dhuun Buusaar iyo Baardheere waxayna difaacyo kasoo ooteen saldhigweyn oo ay ka sameysteen degmada Ceelwaaq.